Olu Akwa Ngwakọta mara mma nke sitere n'ike mmụọ nsọ nke ruffs, ihe ndozi olu nke oge ochie nke ị nwere ike ịhụ na ọtụtụ eserese mara mma nke XVI na XVII narị afọ. Ejiri njiri mara na nke oge a, na-eme ka ụdị ruffs ahụkarị na-anwa ime ka ọ bụrụ oge a. Mmetụta dị omimi nke na-enye onye na-ebu ya mma, na-eji agba ojii ma ọ bụ na-acha ọcha na-enye ohere nchịkọta nke ọtụtụ ihe eji eme ihe ọhụụ na nke dị ọcha. Ihe olu nwere otu olu, na-agbanwe agbanwe. Ihe na - abughi ihe di oke onu ahia ma jiri akwa ejiji di egwu nke na --eme ka ndi ngwa ahia a abughi ihe di egwu kama obu ahu ohuru.
Ọla - Ọla Ntị
Ọla - Ọla Ntị E nwere otu ihe na-ejide omume anyị mgbe niile, na-eme ka anyị kwụsị ịnwụ n'ụzọ anyị. Ihe omuma nke uto nke chi jiri n’echi ndi mmadu n’agha kpaliri ndi mmadu site na mgbe ebighi ebi. Site n'ọchịchịrị nke mbara igwe na mberede wee kpochapụ nke Sun emeela ka ọ dịtee anya nke egwu, inyo mmadụ enyo na ihe ịtụnanya dị iche iche Thedị omarịcha anyanwụ na-eme ka anyị nwee mmetụta na-adịgide adịgide. Ejiri ọla edo kpuchie ọla edo edo nke ọla ọcha nke ọla edo nke sitere na 2012 anwụ anwụ. Nhazi ahụ na-anwa ijide ihe omimi ya na anyanwụ na ọnwa.
Brooch Omume na ụdị mpụga nke isi okwu na-enye ohere ịgbanwe ọhụụ nke ihe ịchọ mma. N'ime odidi ndụ, otu oge gbanwere ọzọ. Oge opupu ihe ubi na-esochi oge oyi na ụtụtụ na-abịa mgbe abalị gafere. Agba na-agbanwekwa yana ikuku. A na-ebute iwu nke nnọchi, ịtụgharị ihe oyiyi dị iche iche n'ime ihe ịchọ mma nke «Asia Metamorphosis», nchịkọta ebe steeti abụọ dị iche iche, eserese abụọ anaghị edozigharị egosipụta n'otu ihe. Akụkụ ndị a na - agagharị agagharị na - eme ka ọ gbanwee omume na ọdịdị nke ịchọ mma.
SATA | BIA - Blue Islands Açor Njirimara Njirimara Tiuzdee 17 Mee
COOKOO Jikọtara Elekere Mọnde 16 Mee
Beertone Biya Swatches Biya Mbọsị Ụka 15 Mee
Mgbanaka Akwa Olu Akwa Ọla - Ọla Ntị Akpụkpọ Ụkwụ Okomoko Brooch